Tracklist: 01. Mountain Of Flowers 02. Three Parts Of The Night 03. Edge Of The Forest 04. Attributes Of Tayza 05. Forest Of Flowers 06. A Sweet Song Of The Cuckoo 07. Extraordinary
Aung Win: Birmanie - Burma: Traditional Music (Air Mail Music Collection). Air Mail Music, Providence Music Sunset-France (2008). Track list below. Enjoy the music! 00:00 Amazing Mandalay 04:55 Lotus Dance 08:06 Burmese Girl 13:49 Floating Clouds 17:31 Mother River 20:53 Back to Bagan 24:21 Buddha Nature 32:15 The Golden Pagoda 36:14 A Place In My Heart
This version is for demonstration of Myanmar Classic Music's Piano Fingering Style in Key C. It might not be good to sing. Sandaya Aung Win played this music for his fans who are learning Myanmar Classic piano style on FB. Originally (Daw) May Shin sang with Key B-flat. The Key B-flat version will be uploaded on iMyanmar channel soon. Sorry for poor quality video by home-made unedited raw video version. တေးသံရှင် မေရှင် (ဒေါ်) ကျေးစေတမန် စန္ဒရား အောင်ဝင်း
The music of Burma (or Myanmar) has similarities with and is related to many other musical traditions in the region. Burmese music includesavariety of folk traditions. A distinct form called the byaw is often played at religious festivals and is sung to the beat ofalong and thin drum, with occasional interruptions by the beating ofalarger drum. The Burmese monarchy as well as the infusion of different regional music styles, have created several classical traditions of Burmese music. The oldest influences may perhaps come from China, which sharesasimilar pentatonic musical scale as classical Burmese music.
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Anonymous. မြမန်းဂီရိ(မူဟန်သွယ်သွယ်) ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ယိုးဒယား။ ရေးသူ-အမည်မသိစာဆို (ဂီတဝိသောဓနီမူ) မြမန်းဂီရိ သေလာတောင်။ နန်းတည်ထောင် ဘုန်းရောင်နေသို့လင်း နောင်ညီကို-ရွှေဘိုနွယ်တော်ရင်း။ ရာဆူဆူ-ပြည်သူခဝပ်စင်း။ရွှေဘုန်းတော်-နှုန်းလျော် စံပြောခင်း။ တေဇာတိုးလို့ဖြိုးဝေ။ မန်းဌာနေ အောင်ဇေယျာပြည်မင်း။ ။ ပြောင်လူးနာဂ ရုစာ။ သော်တာငွေလျှံ။ မျိုးမြတ်ဆဒ္ဒန်။ ရွှေနန်းဘုံတော်။ ရောက်ရာရွှေကိုယ်တော်။ ပြည်တော်နိူင်ငံ ရွှေဘုံတွင်း။ ဆန်းမူရာ သူဇာရွေခပင်း။ ရွှေဘုန်းတော် နှုန်းလျော် စံပျော်ခင်း။ တေဇာ တိုးလို့ ဖြိုးဝေ။ မန်းဌာနေ အောင်ဇေယျာ ပြည်မင်း။ Credit to http://myanmarclassical.wordpress.com/2012/04/26/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%82%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD-%E1%80%99%E1%80%B0%E1%80%9F%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%BC%E1%80%9A/
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Hlaing Htaik Khaung Tin အဆို- ခေတ္တရာတမာချို သီဆိုတီးခတ် - စောင်းဦးဘသန်း၊ ဆိုင်းစိန်ဗိုတင့်၊ စန္ဒယား ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို စိန်ခြူးကြာညောင် အိမ်ရှေ့မင်း အဆောင်တော်ကို မကြွလာ၍ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ရေးသော ဘောလယ် စိန်ခြူးကြာညောင်။ လရောင်-လင်းပါလို့။ မှန်ရွှေပြူတင်းရယ်က-မယ်ခုမျှော်။ ။ သုံးချက်စည်တော်။ ရိုက်ဆော်ညှင်းတယ်လေး။ လင်းရွှေကြက်ဆော်။ ။ သဇင်သင်းပါတဲ့-ခင်းပြန့်ပေါ်။ လာနိုးငယ်မယ်မျှော်လို့။ တကိုယ်တော်ထူး။ ထွေရာစိတ်ကူးပါလို့။ ဖူးရွှေလက်တင်။ ဖြစ်ရှေးကုန်စင်။ ဘ၀င်တုန်ဆွေးတယ်လေး-တွေးကြံလိုက်ရင်။ သစ္စာတော်စူးပါစေ့-ဆိုဦးကပင်။ ခင်လေးကို-မောင်ကြင်ငဲ့။ ရာသက်တွင်ဘဲ။ နောင်သွေမလွှဲပါဘု။ ယုံတော့မေ။ ပြဒုဆောင်ဘွေ-သီဟာတင့်တယ်လေး။ စိုးညာမြင့်နေ။ နတ်ဒေ၀ီဖြားသော်လဲ တပါးကိုမသွေ။ ရှစ်ဗြဟ္မာခြွေပါလို့။ အောင်ဇေယျာညွှန်း။ မတ်ခြွေရွေဝန်းငယ်နှင့်။ ရေသွန်းတော်ခံ။ မဟေသီမှန်၊ ဒေ၀ီတပ်တယ်လေး။ ဦးဆယ်ထပ်ရံ။ ။ သည်မယ်တင်စားပါလို့၊ ကြင်အားငယ်သန်၊ ခုများမှာ-တဥာဏ်နှင့်၊ မူဟန်တော်ခြား။ ပြုတော်မူအားသူမို့၊ မျက်ထားတော်မှုံ။ မသိပြင်ပြင်။ အရင်သူစိမ်းတယ်လေး။ ပိန်းပိတ်လို့ခြုံ။ ။ (သဖြန်) အချစ်ကိုယုံ၊ ပုံပါငဲ့အလုံး။ ။ ရှောင်လွှဲနေပျော်လို့၊ မကြည်သော်- မျက်တော်ဖုံးတယ်။ ဘယ်တွက်ကြောင့်မုန်း။ ။ (ဂီတ၀ီသောဓနီမူ)
This is one of the most well-known Burmese classic songs.
Myanmar classical music (or) Burmese classical song ဆို- အေဝမ်းတင်တင်လှ, စိန်စိန်မြိုင် တီး- စောင်းဦးဘသန်း , စိန်ဗိုတင့် မဲဇာတောင်ခြေ ရတု (လက်ဝဲသုန္ဒရ) မဲဇာတောင်ခြေ၊ ဆီးထွေထွေတည့်၊ မြစ်ရေဝန်းလည်၊ မြိုင်တောဆီက၊ ရွှေပြည်ကိုသာ၊ တရှာတော့မိ၊ မိုးရှိရှိလျှင်၊ သီရိကျက်သရေ၊ တက်ဖြိုးဝေသား၊ အောင်မြေကြော့ကြော့၊ ကုန်းမော့မော့နှင့်၊ ဘိုးတော်ကောင်းမှု၊ တည်ထားပြုသည်၊ ဇမ္ဗူဆီမီး၊ ခြောက်ရောင်ညီးမျှ၊ ကူကြီးသခင်၊ ရွှေလင်းပင်နှင့်၊ ရွှေခြင်္သေ့မြွေ၊ စ၍ရေသော်၊ ရွှေစေတီကြီး၊အသီးသီးတည့်၊ ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊ လျှပ်ရောင်တန်းမျှ၊ ရွှေနန်းရွှေဘုံ၊ အလုံးစုံကို၊ အာရုံမျက်မြင်၊ ဖူးမျှော်ချင်၍၊ သည်တွင်ရွှေမြို့၊ သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း၊ ဖြောင့်တန်းတော့မည်၊ စိတ်ကရည်သည်၊ ရွှေပြည်ဌာနဝေးသောကြောင့်။ မဲဇာတောင်ခြေ တေးထပ် (အမည်မသိ) မဲဇာချောင်၊ နည်းဓလေ့ငယ်သို့၊ ဆီးထွေ့ထွေ့ရေယဉ်၊ ညီးငွေ့ငွေ့ နေမရွှင်တယ်၊ ရွှေဘဝင်မအေး၊ မှိုင်းညို့ညို့ နေရီညိုနေ၊ ရွှေပြည်ကိုတမ်းတ၍ဆွေး။ ။ ဘိုးတော်မြတ် တောင်းဆုမျော်သည်၊ ကောင်းမှုတော်ပကဲ၊ ကြောင်းဆုသော်အတွေးနဲ့၊ ဟိုရှေးကမြင်တယ်၊ သည်မှာနော် သိမ်ဘုရားရယ်လို့၊ ချိန်ဆ၍ ဖူးရတော့တယ်။ သို့ကလောက် ဝေးနယ်ခွင်မှာ၊ ဆွေးဘွယ်အင် ဗျာပါခတာမို့၊ ဌာနကိုပြန်ပို့စေ၊ စောလျက်သူနေ့အရေး၊ အမိနဲ့ကလေးတွေရယ်၊ မွေးဖေကိုမြင်စမ်းလှည့်လေး။ ။ Credit to http://myanmarclassical.wordpress.com/2012/03/21/%E1%80%99%E1%80%B2%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%81%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%AC/
Do Ra Mi Far So Lar Ti Do
"Hard-to-find" Myanmar Music, played by four instrument, Myanmar harp, xylophone, slide guitar and piano, performed by Asia Society - New York in 2003. Myanmar harp: Sein Nyunt Hlaing, Xylophone: U Sein Kalar, Slide: MannYarPyah Sayar Tin, Piani: Sandaya Aung-Win.
U Hlaing Win Maung - Myanmar Classical Songs & Pleasing Melody
Glory of the King - Burmese classical music (arch harp)
ကျေးစေတမန် Myanmar Classic Music, piano version စန္ဒရား အောင်ဝင်း
Myanmar Classical : မြမန်းဂီရိ -Myanmar Pyi Thein Tan
Myanmar Classical: စိန်ခြူးကြာညောင်- Khattayar Tamar Cho
Myanmar Classic Song, Young_pae_suu by Accordian Ohn Gyaw
Myanmar Classical :မဲဇာတောင်ခြေ ရတု နှင့် တေးထပ်
Basic Classical for Myanmar player
Myanmar Music by Myanmar harp, xylophone, slide guitar and piano, presented by Asia Society, 2003
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Anonymous. မြမန်းဂီရိ(မူဟန်သွယ်သွယ်) ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ယိုးဒယား။ ရေးသူ-အမည်မသိစာဆို (ဂီတဝိသောဓနီမူ) မြမန်းဂီရိ သေလာတောင်။ နန်းတည်ထောင် ဘုန်းရောင်နေသို့လင်း နောင်ညီကို-ရွှေဘိုနွယ်တော်ရင်း။ ရာဆူဆူ-ပြည်သူခဝပ်စင်း။ရွှေဘုန်းတော်-နှုန်းလျော် စံပြောခင်း။ တေဇာတိုးလို့ဖြိုးဝေ။ မန်းဌာနေ အောင်ဇေယျာပြည်မင်း။ ။ ပြောင်လူးနာဂ ရုစာ။ သော်တာငွေလျှံ။ မျိုးမြတ်ဆဒ္ဒန်။ ရွှေနန်းဘုံတော်။ ရောက်ရာရွှေကိုယ်တော်။ ပြည်တော်နိူင်ငံ ရွှေဘုံတွင်း။ ဆန်းမူရာ သူဇာရွေခပင်း။ ရွှေဘုန်းတော် နှုန်းလျော် စံပျော်ခင်း။ တေဇာ တိုးလို့ ဖြိုးဝေ။ မန်းဌာနေ အောင်ဇေယျာ ပြည်မင်း။ Credit to http://myanmarclassical.wordpress.com/2012/04/26/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%82%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%AD-%E1%80%99%E1%80%B0%E1%80%9F%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%B...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Hlaing Htaik Khaung Tin အဆို- ခေတ္တရာတမာချို သီဆိုတီးခတ် - စောင်းဦးဘသန်း၊ ဆိုင်းစိန်ဗိုတင့်၊ စန္ဒယား ဂီတလုလင်မောင်ကိုကို စိန်ခြူးကြာညောင် အိမ်ရှေ့မင်း အဆောင်တော်ကို မကြွလာ၍ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ရေးသော ဘောလယ် စိန်ခြူးကြာညောင်။ လရောင်-လင်းပါလို့။ မှန်ရွှေပြူတင်းရယ်က-မယ်ခုမျှော်။ ။ သုံးချက်စည်တော်။ ရိုက်ဆော်ညှင်းတယ်လေး။ လင်းရွှေကြက်ဆော်။ ။ သဇင်သင်းပါတဲ့-ခင်းပြန့်ပေါ်။ လာနိုးငယ်မယ်မျှော်လို့။ တကိုယ်တော်ထူး။ ထွေရာစိတ်ကူးပါလို့။ ဖူးရွှေလက်တင်။ ဖြစ်ရှေးကုန်စင်။ ဘ၀င်တုန်ဆွေးတယ်လေး-တွေးကြံလိုက်ရင်။ သစ္စာတော်စူးပါစေ့-ဆိုဦးကပင်။ ခင်လေးကို-မောင်ကြင်ငဲ့။ ရာသက်တွင်ဘဲ။ နောင်သွေမလွှဲပါဘု။ ယုံတော့မေ။ ပြဒုဆောင်ဘွေ-သီဟာတင့်တယ်လေး။ စိုးညာမြင့်နေ။ နတ်ဒေ၀ီဖြားသော်လဲ တပါးကိုမသွေ။ ရှစ်ဗြဟ္မာခြွေပါလို့။ အောင်ဇေယျာညွှန်း။ မတ်ခြွေရွေဝန်းငယ်နှင့်။ ရေသွန်းတော်ခံ။ မဟေသီမ...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song ဆို- အေဝမ်းတင်တင်လှ, စိန်စိန်မြိုင် တီး- စောင်းဦးဘသန်း , စိန်ဗိုတင့် မဲဇာတောင်ခြေ ရတု (လက်ဝဲသုန္ဒရ) မဲဇာတောင်ခြေ၊ ဆီးထွေထွေတည့်၊ မြစ်ရေဝန်းလည်၊ မြိုင်တောဆီက၊ ရွှေပြည်ကိုသာ၊ တရှာတော့မိ၊ မိုးရှိရှိလျှင်၊ သီရိကျက်သရေ၊ တက်ဖြိုးဝေသား၊ အောင်မြေကြော့ကြော့၊ ကုန်းမော့မော့နှင့်၊ ဘိုးတော်ကောင်းမှု၊ တည်ထားပြုသည်၊ ဇမ္ဗူဆီမီး၊ ခြောက်ရောင်ညီးမျှ၊ ကူကြီးသခင်၊ ရွှေလင်းပင်နှင့်၊ ရွှေခြင်္သေ့မြွေ၊ စ၍ရေသော်၊ ရွှေစေတီကြီး၊အသီးသီးတည့်၊ ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊ လျှပ်ရောင်တန်းမျှ၊ ရွှေနန်းရွှေဘုံ၊ အလုံးစုံကို၊ အာရုံမျက်မြင်၊ ဖူးမျှော်ချင်၍၊ သည်တွင်ရွှေမြို့၊ သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း၊ ဖြောင့်တန်းတော့မည်၊ စိတ်ကရည်သည်၊ ရွှေပြည်ဌာနဝေးသောကြောင့်။ မဲဇာတောင်ခြေ တေးထပ် (အမည်မသိ) မဲဇာချောင်၊ နည်းဓလေ့ငယ်သို့၊ ဆီးထွေ့ထွေ့ရေယဉ်၊ ညီးငွေ့ငွေ့ နေမရွှင်တယ်၊ ရွှေဘဝင်မအေး၊ မှိုင်းညို့ညို့ နေရီညိုေ...
Tracklist: 01. Mountain Of Flowers 02. Three Parts Of The Night 03. Edge Of The Forest 04. Attributes Of Tayza 05. Forest Of Flowers 06. A Sweet Song Of T...
Aung Win: Birmanie - Burma: Traditional Music (Air Mail Music Collection). Air Mail Music, Providence Music Sunset-France (2008). Track list below. Enjoy the mu...
This version is for demonstration of Myanmar Classic Music's Piano Fingering Style in Key C. It might not be good to sing. Sandaya Aung Win played this music fo...
The music of Burma (or Myanmar) has similarities with and is related to many other musical traditions in the region. Burmese music includesavariety of folk tr...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Anonymous. မြမန်းဂီရိ(မူဟန်သွယ်သွယ်) ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ယိုးဒယား။ ရေးသူ-အမည်မသိစာဆို (ဂီတဝိသောဓနီမူ) မြ...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Hlaing Htaik Khaung Tin အဆို- ခေတ္တရာတမာချို သီဆိုတီးခတ် - စောင်းဦးဘသန်း၊ ဆိုင်းစိန်ဗိုတင့်၊ စန္ဒယား ဂီတလ...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song ဆို- အေဝမ်းတင်တင်လှ, စိန်စိန်မြိုင် တီး- စောင်းဦးဘသန်း , စိန်ဗိုတင့် မဲဇာတောင်ခြေ ရတု (လက်ဝဲသုန္ဒရ) မဲဇာတေ...
"Hard-to-find" Myanmar Music, played by four instrument, Myanmar harp, xylophone, slide guitar and piano, performed by Asia Society - New York in 2003. Myanmar ...
Tracklist: 01. Mountain Of Flowers 02. Three Parts Of The Night 03. Edge Of The Forest ...
Aung Win: Birmanie - Burma: Traditional Music (Air Mail Music Collection). Air Mail Music,...
This version is for demonstration of Myanmar Classic Music's Piano Fingering Style in Key ...
The music of Burma (or Myanmar) has similarities with and is related to many other musical...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Anonymous. မြမန်းဂီရိ(မူဟန်သွယ်သ...
Myanmar (or) Burmese Classical music or song Composed by Hlaing Htaik Khaung Tin အဆို- ခေတ...
Myanmar classical music (or) Burmese classical song ဆို- အေဝမ်းတင်တင်လှ, စိန်စိန်မြိုင် တ...
"Hard-to-find" Myanmar Music, played by four instrument, Myanmar harp, xylophone, slide gu...
U Hlaing Win Maung - Myanmar Classical Songs & Ple...
Aung Win: Traditional Music of Myanmar...
Glory of the King - Burmese classical music (arch ...
ကျေးစေတမန် Myanmar Classic Music, piano version စန...
Traditional Myanmar Music...
Myanmar Classical : မြမန်းဂီရိ -Myanmar Pyi Thein ...
Myanmar Classical: စိန်ခြူးကြာညောင်- Khattayar Tam...
Myanmar Classic Song, Young_pae_suu by Accordian O...
Myanmar Classical :မဲဇာတောင်ခြေ ရတု နှင့် တေးထပ်...
Basic Classical for Myanmar player...
Myanmar Music by Myanmar harp, xylophone, slide gu...